Akanakisa Manipulator Ane Suction Cup Mugadziri uye Fekitori |Tongli
Tongli manipulators ane kapu yekuyamwa anoshandiswa zvakanyanya kubata kusingaparadze mahwendefa akasiyana, kusanganisira mahwendefa asingadziviriri, mahwendefa ealuminium, mahwendefa etitanium, mapaneru anoumbwa, nezvimwe.
Iwo zvakare anoshandiswa zvakanyanya kune laser yekucheka muchina, plasma yekucheka muchina, mvura-jet yekucheka muchina, nhamba yekudzora muchina, nezvimwe.
Iyo yekukwevera kapu yemidziyo yakagadzirwa nealuminium yakakandwa ine imwe-nguva yakakwira-kudzvanya kufa-kukanda kuumbwa, ine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwirira, inobvisa inosveta kapu rabha, iri nyore kutsiva, ine hushamwari kwezvakatipoteredza uye ine yakakwira mutengo-unoshanda.
Brand-nyowani yakachena pneumatic system, hapana chikonzero chekubatanidza magetsi, hapana muripo, kusimudza pneumatic, pneumatic adsorption, hupfumi uye inoshanda.
Sucker chinzvimbo chinogona kugadziridzwa kuti isangane nedimensional shanduko yemahwendefa akasiyana.
Suction-cup manipulator inokwanisa kubata zvinhu zvine furati uye yakajairika nzvimbo, saka iyo inoshandiswa mukugadzirisa zvinhu, kugadzira uye kuronga, indasitiri yechikafu, kugadzira mota, kubata magirazi, kubata simbi uye mimwe minda, uye nhamba yavo nemhando ndizvo zvakakura. mukubata manipulators.
Ngatisarudze zvinoenderana nechinangwa chekuziva uye titarise mashandisirwo ekuyamwa mukombe manipulator:
Inonyanya kushandiswa kusimudza uye kutamisa zvinhu zvinorema.
Zvakadai semakatoni akaturikidzana uye pasuru yekubata muindasitiri yezvishandiso;
Zvakadai sekusimudza uye kubata kwezvikamu uye zvigadzirwa muindasitiri yemakanika nemakemikari;
Zvakadai segirazi, pepa resimbi zvikamu kubata uye kutendeuka;
Zvakadai sekutakura mikwende yepaairport uye kubata;
Zvakadai sekusimudzira uye kutamiswa kwezvikamu zvakakura.
Aya manipulators ari nyore mukugadzirisa.Mazhinji acho maoko anochinjika ane makapu ekuyamwa.Vanosvika pazvinhu zvakasarudzwa kuburikidza nekushanda kwevanhu, uye panenge pasina hurongwa hwekutonga.Mutengo wacho wakachipa, uye kushandiswa kwakapararira.Inonyanya kutsiva kubata kwemaoko uye kusimudza zvinhu zvinorema.
Muchina wakaoma zvishoma une madhigirii mashoma erusununguko unogona kuona kupidigura kwezvinhu zvakabatwa.
2. Palletizing otomatiki
Inonyanya kushandiswa mune logistics, warehousing, uye ports.Iyo inoshandiswa kubata otomatiki yezvinhu uye yakagadziriswa-point stacking mabasa.
Semuyenzaniso, kuronga uye palletizing muindasitiri yezvinhu uye mabhizinesi ekugadzira;
Semuenzaniso, kuchengetedza, kuchengetedza zvinhu muchiteshi;
Rudzi urwu rwemanipulator ine robhoti ruoko runogona kufamba otomatiki, asi mazhinji acho ane yakaderera madhigirii erusununguko uye anowana zviri nyore kufamba.Iyo nzvimbo yekumisikidza kurongeka haina kukwirira, chirongwa uye chekutonga system zviri nyore, uye actuator haisi chaiyo mudziyo.
T3.Precise Capture uye Distribution
Mune dzimwe nzvimbo, manipulators anodiwa kuti awane kubata chaiko uye kunyatsoisa zvinhu, senge maindasitiri ezvekudya, ekurapa, uye emagetsi.Aya maindasitiri ane zvakakwirira zvinodikanwa zvehutsanana, uye suction cup manipulators anoshandiswa zvakanyanya.Kuti uwane chaiyo chinzvimbo, akawanda-degree-e-rusununguko marobhoti maoko anowanzoshandiswa.
Iyo dhigirii yerusununguko rwe manipulator, chimiro zvakare chakawanda uye chakasiyana.
Iyo actuator yekusveta kapu manipulator kapu yekusveta vacuum, inogona kubata zvinhu zvakasiyana siyana.Kapu yekukweva yevacuum ine simba rekukweva rakawanda uye yakachena uye ine hutsanana.Inofarirwa nemamwe maindasitiri anoda hutsanana.Iyo manipulator inogona kuve yakashongedzerwa neakasiyana mafomu uye zvimiro.Inogona kunge isingadzoreki inofambiswa nemunhu inochinjika ruoko, yakaderera-dhigirii-ye-rusununguko serial manipulator, kana yakakwirira-dhigirii-ye-rusununguko parallel manipulator.Kufananidza kunowedzera kushanduka.Zvichienderana nezvakanaka zvekuyamwa mukombe manipulator, rudzi urwu rwemanipulator rwunoverengera chikamu chakakura kwazvo chemusika wemanipulator.
Zvakapfuura: Manipulator NeClamp
Zvinotevera: Balanced crane
Vacuum Makapu Yekusimudza